Ndeipi iyo inonyanya kukosha muwebsite SEO yekambani yezororo yekambani?
Sangano renzvimbo yekuzorora ndiro bhizinesi remazuva ano rinogona kuunza purofiti yakanaka kune muridzi kana iine usimba hwakasimba paIndaneti. Zvisinei, kana iwe ukapedza pazasi yehutsva yematsva yekutsvaga, uri kurasikirwa nemikana yako yebhizimisi uye kutengesa. Kuti uite kuti bhizinesi rako ribudirire, unoda kugadzira webhusaiti-yebasa webusaiti uye woiita maererano nehutano hweGoogle. Nokushandisa maitiro ekutanga eSeO, iwe uchakwanisa kuvandudza nzvimbo yako yekutsvaga nzvimbo uye kukoshesa huwandu hutsika kunewebsite yako yekupa mazororo. Heano zvimwe zvakananga zvakasikwa SEO mazano ayo achakubatsira kuti uwedzere kushandiswa kwako kwebhizimisi kuIndaneti.
Kuti uwane mhinduro yakakosha pamubvunzo wemushandisi, tsvakurudzo injini bots parse yako VR bhizinesi 'webhusaiti kune mamwe mazwi ekutsvaga. Kana nheyo yako yepaiti yakwana zvakakwana mhinduro yomubvumi, ipapo Google inoshandisa iyo sechiratidzo kuti uvandudze hutsika yako seine chiremera chekutonga uye chakakosha. Kuti ufanane nemakakatanwa ako evanhu vanogona kuverenga, iwe unofunga kufunga kuti ndeupi mazwi vashandisi vangatsvaga kana vari kuedza kuwana chikwata chenyu chekushandira, uye vanobatanidza mazwi aya ehutano muhutano hwako. Iwe unogona kushandisa mazwi akadai se "nzvimbo yezororo" kana "kambani inopa mazororo ekubhadhara mabasa. "Zvisinei, mazwi aya anokosha anowirirana uye haagoni kukuunzira magwara akawanda. Ndicho chikonzero iwe unofunga kufunga nezvemashoko emakore mazhinji emakore akawanda ayo vanhu vanoshandisa mutauro wezuva nezuva. Kuti uite nyore nzira yekutsvakurudza mashoko, iwe unogona kushandisa shanduro dzakakosha dzekushandisa seSemual Auto SEO kana Google Keyword Planner.
. Iyo inoshanda sekutarisa kune webhuti yehupenyu uye inobatsira vanhu kuti vasarudze kana vachida kutevera iwe web source kuti uwane mamwe mashoko kana kwete. Zvakare, zvakakosha kuwedzera migwagwa-kuwana mazwi ezvinyorwa meta tsanangudzo yako yekutendera bots search index index yako. Meta tsanangudzo dzakanyatsogadzirwa dzichaita kuti pfuure-kuburikidza nehuwandu uye kuvandudza sangano rako rekuvakirwa kwezororo SEO.
. Zvinongotora maminetsi mashomanana kuita bhizinesi account pa Facebook kana Instagram. Zvisinei, inopa kambani yako simba guru munzanga yevanhu. Paunenge wakasika zvinyorwa zvako zvakasiyana-siyana zvenhoroondo, ita zvisikwa zvakasiyana-siyana kune umwe neumwe wavo. Uyezve, teerera kutarisa pfungwa sezvinoshandiswa nevashandisi zviri nani kupfuura magwaro. Ndicho chikonzero chekuita mifananidzo yemhando, mavhidhiyo mafirimu, uye mavhidhiyo ekuita bhizinesi rako rega mune zvemagariro evanhu vanofarira vateveri vako.
Unogona kukumbira mabhizimisi ako ekune dzimwe nzvimbo kuti ataure newaini yako yezororo nzvimbo kubva pamapeji avo. Uyezve, iwe unogona kubatsirwa kubva pahulogi kutumira, kushanda pamwe nevatungamiri vanofunga mumisika yako yekutengesa. Kuvakwa kwekugadzira inzira inokurudzira kubvumirana kwebhizimisi rako uye kuvandudza mararamiro ako Source .